EX - ABSDF: " အေးသီမ" EX - ABSDF
" အေးသီမ" Mya Khwar NyoFollow
" ဟဲ့.. အေးသီမ .. ထ ထ" အမေ့အော်သံ အက်အက် ကြောင့် စောင်အစုတ်လေးထဲ ကွေးနေရာမှ သူဖျတ်ခနဲ လန့်နိုးသွား သည်။ ခြေထောက်နားမှ စိုစိစိ အထိအတွေ့ကြောင့် မောင်လေး
သေးပေါက်ချ ထားပြန်ပြီဟု အိပ်ချင်မူးတူး တွေးမိသော်လည်း ... မောင်လေး သေသွားပြီ ဆိုတာ သူ ချက်ခြင်း သတိရလိုက်သည် ။ မိုးယိုတာ ဖြစ်မည်။ မောင်လေးသေတာ ၇ ရက်ကျော်ခဲ့ပြီ။ အေးသီမ မောင်လေး သိပ်ချစ်ဖို့ ကောင်းခဲ့ပါသည်။ မဲတူးပြာခံနေသော ဝဝလုံးလုံး မောင်လေး.. ဘယ်သူမှသင်မပေးပါပဲ
အေးသီမကို ပြုံးရယ်ပြတတ်သောမောင်လေး.. ။ဂျီးကြောင်းထနေသော ပါးဖောင်းဖောင်းလေးအား နမ်းမဝချင်။ မောင်လေး အခါလည် ကျော်ရုံကတည်းက အိမ်ကို
အလုပ်အကျွေးပြုခဲ့သည်။ မအံ့သြပါနှင့် ... အမှန်တကယ် မောင်လေး ရှာကျွေးသော ထမင်းများ အေးသီမတို့ စားခဲ့ရသည်။ "အံ့ကြည် နင့်ကလေး ငှါးမလား တရက် ၂ထောင်တဲ့ .. ဆန်ဖိုးရတာပေါ့ ။ " " ခေါ်သွားလေ .. ဟောဟိုမှာ" အမေက ချဲတွက်မပျက်ပဲ ပုဆိုးစုတ် အထွေးထဲဖင်ပြောင် ကွေးကွေးလေး အိပ်ပျော်နေသော မောင်လေးကို မေးငေါ့ဖြေသည်။ မနေနိုင်သော အေးသီမ ကသာ "ခဏလေးအန်တီ ဘယ်ထိထွက်ကြမှာတဲ့ လဲ?? မိုးတွေကအုံ့လို့.. သမီး မောင်လေးကို အနွေးထည်လေး ဝတ်ပေးလိုက်ချင်လို့... "
" မသာမ လျှာရှည်မနေနဲ့ .. နင်ဘာဝတ်ပေးပေး ဟိုက ဟာတွေအကုန်ချွတ်ပြီး စွတ်ကျယ်စုတ်ပဲ ဆင်မှာ.. လုပ်စရာရှိတာလုပ်စမ်း ., စောက်စကားကို များတယ်" အမေ့ငေါက်သံကြောင့် အေးသီမ အထွန့်မတတ်ရဲတော့.. ။ အန်တီအေး ဇတ်ကနဲ ပွေ့ယူသွားသော မောင်လေးကို မျက်ရည် အဝဲသား နှင့် လိုက်ကြည့်နေမိသည်.. ။ အိပ်ချင်မူးတူး နှင့်မို့ထင့် မောင်လေးဆီက ဘာသံမှမကြားရ .. ။ သုံးအိမ်ကျော်လောက်ရောက်မှ မောင်လေး လန့်ငိုသံကြားရသည် .. စူးစူးဝါးဝါး ကျယ်ကျယ် လောင်လောင်.. ။ မောင်လေးငိုနေသည့် အသံက ဝါးဝါး ဟု
မထွက်ပဲ မမရေ မမရေ ဟု အေးသီမ ကြားနေသည်။ ကမန်းကတန်း တဲကပြင်လေးထိထွက်ပြီး မောင်လေးကို မြင်ရနိုး လိုက်ကြည့်သည်။ ပြီးတော့ စာရွက်များကြားထဲ ခံတံတစ်ချောင်းဖြင့် အလုပ်ရှုပ်နေသော အမေ့ဆီ ပြန်လာပြီး .. "အမေ .. လုပ်ပါဦး မောင်လေးငိုနေတယ် .. မောင်လေးငိုနေတယ်တော့.. " "ဗြောင်း.... "
" မှတ်ပလား ဟင်.. ကိုယ့်စောက်လုပ် မဟုတ်တာ ဝင်ဝင်ရှုပ်ချင်ဦး..။ နင့်မောင်တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘူး။ တရပ်ကွက် လုံးက ကလေးတွေ အငှါး လိုက်နေကြတာ
မမြင်ဘူးလား? ဒါအလုပ်ပဲ။ ငါတားတားနေတဲ့ကြားက နင် ထမင်းရည်တွေ ခိုးခိုးတိုက်နေလို့ နင့်မောင် ဝလုံးနေလို့ ငှါးမယ့်လူမရှိတာ.. ။ ခုလာခေါ်ဖော်ရတာပဲကျေးဇူးတင် ။ မသာမ သေမယ်။ နောက်ခါ" အမေ့လက်ကြမ်းကြီးရဲ့ ရိုက်ချက်ကကျောပြင်တစ်ခုလုံး အောင့်တတ်သွားသည်။ သို့သော် မနာပါ ။ နာနေသည်က အေးသီမ ဘယ်ဘက်ရင်အုံက ဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ
ပညာမတတ်သော ၁၅ နှစ်သမီး အေးသီမ မတွေးတတ်။ ဒီလိုနှင့်ပဲ မောင်လေးကို နေ့စဉ် မနက်စောစော လာလာခေါ်ပြီး ညနေမိုးချုပ်ကြီးကျမှ လာပြန်ပေးကြသည်။ ပထမတော့ အေးသီမ မောင်လေး ပင်ပန်းပြီး အိပ်နေတာ ဖြစ်မယ်ဟုထင်သေးသည်။ ဒါပေမယ့် မောင်လေး အရင်လို မဟုတ်တော့.. မောင်လေး ထမင်းစားပါတယ် ပြောပြီး တဖြည်းဖြည်း.. ပိန်လာသည်။ ပြီးတော့ အချိန်တော်တော်များများ မောင်လေး အိပ်နေတတ်သည်။ ညမိုးချုပ်လို့ အေးသီမ ဆီမောင်လေးပြန်ရောက်တိုင်း အေးစက်နေသော အသားများနှင့် မောင်လေး အိပ်မောကျနေတတ်သည်။ အမြဲတမ်း အသားတွေ အေးစက်ပြီး လှုပ်ရှားမှုမရှိ အိပ်မောကျနေတတ်သော မောင်လေး.. မိုးသည်းသောမနက်ခင်းတစ်ခုတွင် အရင်အတိုင်း အသားတွေအေးစက်ကာ မလှုပ်မယှက် အိပ်ပျော်နေသည်။ မထူးဆန်းပါ... ထူခြားတာတစ်ခုက မောင်လေး အသက်မရှူတော့တာ ဖြစ်သည်။ ဟုတ်သည် မောင်လေး အဲ့လို သေသွားခဲ့တာ ဖြစ်သည်။
" ဟဲ့ မထသေးဘူးလား။ .. ထောင်ထဲဝင်သွားတဲ့ သတောင်းစား သူ့အဖေ အချိုးပါတော် .. စောက်ပျင်းတွေ တစ်တာ တစ်တာ ဆိုတာ။ မြန်မြန်ထ ကောင်မရဲ့ .. တိုးကျော် မမှီပဲနေမယ်" " ဟုတ် အမေနိုးပါပြီ"
မောင်လေးအကြောင်းတွေးရင်း ဝဲမိသော မျက်ရည်စများကို မသုတ်တော့ပဲ လူးလဲထရင်း ရေကပြင်က မိုးရေခံထားသော ဇလားထဲမှမိုးရေများနှင့်ရောချလိုက်သည်။ အမေပြောတာ ဟုတ်သည်။ ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားကို မနက် ၅ ခွဲကပ်သော တိုးကျော် သင်္ဘောအမှီ ကောက်ညှင်းပေါင်း တောင်းနှင့်ရောက်ဖို့အရေးကြီးသည်။ ပြီးလျှင် ဆင်မင်းအိမ်ယာဘက် ပတ်ရမည်။ သူ၉ ခွဲအမှီ ကောင်ညှင်းပေါင်း ကုန်မှ ညနေ ၁၀နှစ်သမီး ညီမလေး ညဘက် မုန့်ဖက်ထုတ်ထွက်ရောင်းဖို့ အရင်းရပေမည်။ ပြီးလျှင်
သူတနေကုန် ရေစည်လှဲတိုက်ရမည်။ မိုးရာသီမို့ အလုပ်မကောင်းလှ အိမ်ကျနည်းသည်။
အမေပြင်ပေးထားသော ကောက်ညှင်းပေါင်းတောင်း ခါးပေါ်ကောင်တင် ခေါင်းပုသုံးသော ဖေ့အမွေ ပုဆိုးစုတ်လေး ပုခုံးပေါ်လွှားရင်း သူလှေဆိပ်ဆင်းရန်ပြင်သည်.. ။
ဟဲ့ ဒီမိုးကုန် နင်ဈေးဆက်မရောင်းရတော့ဘူး။ .. ရန်ကုန်ဘက် အလုပ်ဆင်းရမယ်..
မဆင်းခင် ၃ လခံဆေး ကြိုထိုးထားရမတဲ့.. ။ ငါ ကြည်အေးတို့နဲ့ ပြောပြီးပြီ။ .. ပြင်စရာရှိတာ ပြင်ထားချည်" .... အမေ့အော်သံနဲ့ တဲအိုလေးကို အရေးတယူလုပ် လှည့်မကြည့်နေတော့.. ။ ဘာကို ပြင်ဆင်ထားရမည်နည်း .... ။ မိုးမလင်းသေးသောကြောင့်လား .. မိုးမှောင်ကြောင့်လား မသိ။
အေးသီမ ရှေ့က လမ်း တဆိတ်တော့ မှောင်လွန်းသည်။ ။ Inspired by true story မြခွါညို